Nanatrika ny zaikabe ho an’ny tanora manerantany tany Jakarta ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Nanatrika ny zaikabe ho an'ny tanora manerantany tany Jakarta ny Global Voices
Voadika ny 03 Jolay 2019 13:26 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2016)
Natao tao Jakarta, Indonezia ny 24 ka hatramin'ny 26 Novambra 2016 ny Zaikabe ho an'ny Tanora Manerantany 2016 ary tonga tany an-toerana ny Global Voices.
Nampihaona tanora miisa 150 manerana izao tontolo izao tamin'ny fiezahana ny hamaha ireo olana saro-bahàna indrindra izay atrehan'izy ireo ity zaikabe izay nokarakarain'ny Hetsika Iraisam-pirenena ho an'ny Tanora – Youth Time International Movement (YT) ity, fikambanana tsy miankina sady tsy mitady tombom-barotra niorina tao Prague tamin'ny tamin'ny 2010.
Tamin'ity taona 2016 ity, nijery ny momba ny fanatanterahana ny fampandrosoana lovain-jafy amin'ny tsena iraisam-pirenena tsy mitsaha-miova ny zaikabe. Lohahevitry ny zaikabe ny Fifampiankinana eo amin'ny Faharetana sy ny Fanombohan'asa Ara-tsosialy – ny Fananganana ny Tontolo Iainana Maharitra hisian'ny Fampandrosoana Ara-tsosialy amin'ny alàlan'ny Teknolojia Vaovao .
Araka ny tranonkalany, “nanome sehatra hifanakalozan-kevitra ho an'ny tanora mpikaroka zava-baovao ara-tsosialy mba hifampiresahana malalaka, hizarana hevitra sy traikefa amin'ireo namany avy amin'ny fihaviana ara-kolontsaina sy faritra samihafa manerana izao tontolo izao” ny zaikabe.
Amin'ny maha-mpandray anjara ahy avy ao Guyana ao amin'ny Global Voices Karaiba, hifantohako manokana ireo dinika amin'ny fampandrosoana maharitra amin'ny akora – mety ho tena ilaina tokoa ireo hevitra resahina satria mikasa ny hampivelatra ny iray amin'ireo tahirin-tsolika an-dranomasina lehibe indrindra hita manerantany ny governemanta.
Hifantoka amin'ny sehatra hiresahana fanabeazana ny tanora sy ny asa ihany koa aho. Misy ny olana goavana momba ny tsy fananan'ny tanora asa ao Karaiba, ary ny tahan'ny tsy fananan'asa any Guyana no avo indrindra ao amin'ny faritra. Raha ny marina, nahita ny fanadihadiana nataon'ny Bankin'ny Fampandrosoana Karibeana tamin'ny volana May 2015 fa niakatra manodidina ny 40% ny tahan'ny tsy fananan'asan'ny tanora ao Guyana hatramin'ny taona 2000. Namaritra ny olana ho toy ny “olana ara-pampandrosoana manan-danja izay mitaky vahaolana maika sy maharitra” io fanadihadiana io.
Nisokatra ho an'ny tanora eo anelanelan'ny 18 sy 32 taona ny fandraisana anjara tamin'ny zaikabe. Notohanana ara-bola tamin'ny ampahany ny fandraisana anjara tamin'izany.